Kwa-Apple babhiyozela uSuku loMhlaba ngokunikela nge- $ 1 ngentengo nganye ngeApple Pay | Ndisuka mac
Ayisiyonto intsha le eApple, kude kuyo kwaye kukuba umnikelo uhlala uqhelekile kwinkampani yaseCupertino amaxesha ngamaxesha, nokuba kukulwa i-AIDS okanye njengakule meko ukukhusela iplanethi kancinane ngakumbi. Kule meko yi- Umnikelo oya kumbhiyozo woMhla woMhlaba.
Kule meko iApple Pay iphambili kwaye U-Apple uzakunikela ngedola kwi-Conservation International kwintengiselwano nganye eyenziwa kwinkonzo yokuhlawula yenkampaniNokuba kusezivenkileni okanye kwiVenkile yeApple.
Njengakwezinye iimeko, izibonelelo zilinganiselwe kwisigidi esinye seedola. Ezi ntlobo zemisebenzi zihlala zinika iApple umfanekiso olungileyo wenkampani ezinikele ekunyamekeleni umhlaba kunye nendalo.
Ulondolozo lwaMazwe ngaMazwe lizinikele ekukhuseleni nasekuqinisekiseni ukuba indalo iyaqhubeka nokuphila, ukudibanisa umsebenzi wasentsimini kunye nezinto ezintsha kwisayensi, umgaqo-nkqubo kunye nezemali. Ulondolozo lwaMazwe ngaMazwe luye lwanceda ukukhusela ngaphezulu kwesigidi sezigidi zeekhilomitha zomhlaba nolwandle kumazwe angaphezu kwama-70 kwihlabathi liphela.
Olu hlobo lomsebenzi alubandakanyi umthengi naziphi na iindleko ezongezelelekileyo, oko kukuthi, umthengi uya kuthenga imveliso yakho okanye isicelo kwaye iApple iya kuba nguye ojongene nokwenza umnikelo wedola leyo. Kukuhamba ngendlela eqhelekileyo eApple njengoko sisitsho ekuqaleni kwenqaku kwaye ngaphakathi Eli tyala liza kuqala ngoLwesine we-22 ka-Epreli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Kwa-Apple babhiyozela uSuku loMhlaba ngokunikela nge- $ 1 ngentengo nganye ngeApple Pay
Ababulali beNyanga yeentyatyambo, bayaqhubeka nokwandisa isamente